आधा घण्टामा आउँछु भनेर घरबाटै ब्वाइफ्रेण्डसँग हिँडेकी २१ वर्षीय बिना आखिर कहाँ बेपत्ता भइन् ? प्रेमी भन्छन्: पैसा झिकेर बाहिर आउँदा उनी थिईनन् – Classic Khabar
July 8, 2021 535
नवलपुरको गैंडाकोट नगरपालिकाको झपर्दीका जयश्वर सापकोटाकी २१ वर्षीया छोरी विना हराएपछि अहिले परिवार ठूलो समस्यामा परेका बेला बिनाका प्रेमी भनिएका युवक प्रवेश कँडेल समातिएका छन् । असार १८ गते साँझ उनलाई ५ वर्षदेखि प्रेम सम्बन्धमा रहेका युवक प्रवेश कँडेलले आफ्नो घर लैजाने भन्दै विनाकै घरबाट स्कुटरमा राखेर बाबु आमाको सल्लाहमा नै निस्किएका थिए ।
तर आधा घण्टामा नै फर्किन्छु भनेर घरबाट निस्किएकी छोरी विना एक साता लामो समय हुँदा पनि नर्फकिएपछि परिवार तनावमा रहेको बाबु जयश्वर सापकोटाले फेसबुकमा एउटा स्टाटस पोस्ट गर्दै सबैलाई छोरी खोजीदिन आग्रह गरेका छन् । सापकोटाले भने, ‘ असार १४ गते आधा घण्टामा आउँछु भनेर उनको ब्वाइफ्रेण्डसँग गएकी हुन् । अहिलेसम्म फर्किएकी छैनन् । उनलाई कतै पनि भेटिएको छैन । गौरीगञ्जमा लगेर छोरीलाई कुटेको भन्ने सुनेको हो ।
कहाँ छ के छ केही थाहा छैन । केटाले दुईवटा केटीलाई प्रेम गर्ने कुरा थाहा भएपछि यो समस्या आएको हो ।’ उनले भरतपुर महानगरपालिका–४ का प्रवेश कँडेलसँग केही वर्षदेखि छोरीको प्रेम सम्बन्ध रहेको र दुई वर्षपछि विवाह गर्ने केटाको परिवारले भन्दै आएको जानकारी दिए । उनले छोरी चारदिनदेखि घर नफर्किएपछि असार १८ गते साँझ फेसबुकमा एउटा स्टाटस पोस्ट गरेर छोरी हराएको बारेमा सूचना सार्वजनिक गरेका थिए । सूचना सार्वजनिक गर्दा पनि कसैले उनको बारेमा जानकारी दिएनन् । दुई छोरी र एक छोरामा बिना जयश्वरको कान्छी छोरी हुन् ।
चितवन प्रहरीका अनुसार बिनाको प्रेमीले आफ्ना दुई प्रेमिका बिना र कुसुमको भेट गराएपछि दुई जनाको बीचमा बा झाबा झ भएको र बिना बेहोस भएको बयान दिएका छन् । बेहोस भएकी बिनालाई कुसुमको घर लगेको बताएका छन् । साढे साँझ ६ बजेतिर छोरी बेहोस भएको खबर जयश्वरलाई आएको थियो । उनले भने,‘ खबर सुन्नासाथ मोबाइल छोरीलाई दिन भने तर बिना राम्रोसँग बोल्न सकिनन् । ‘तिमीहरू कता छौ म आउँछु भन्दा प्रवेश र विना दुबैले उनीहरू भएको ठाउँ बताएनन्,’ जयश्वरले भने, ‘प्रवेशलाई सवारीसाधन नभए मेरी छोरीलाई अटोरिक्सामा भए पनि घर ल्याइदिइहाल भनेँ ।’
चितवन प्रहरीका अनुसार बिनाको प्रेमीले आफ्ना दुई प्रेमिका बिना र कुसुमको भेट गराएपछि दुई जनाको बीचमा बाझाबाझ भएको र बिना बेहोस भएको बयान दिएका छन् । युवकले प्रहरीसँगको बयानमा ती युवतीको घरबाट बिनालाई गैँडाकोट पु- याउन स्कुटर निकाले पनि बिना त्यसमा बस्न नमानेको बताएका छन् । उनका अनुसार बिना पैदल नै चौबिसकोठीसम्म गएको तर आफू एटीएममा पसेको बेला बेपत्ता भएको बताएका छन् ।
Prevरुपा सुनारले आफ्नो मोबाइल अनु,सन्धानमा नदिनु को कारण के हो ? खुल्यो सब ग,म्भिर रहस्य,भिडियो हेरौ
आयुसा गौतमको जन्म दिनमा इन्द्रेणीमा चल्यो रु’वाबासी,ऋण लागेपछि काठमान्डौको घर छाडेर डेराको बास(हेर्नुहोस कुराकनी)